Ahoana ny fametrahana mpamaky PDF ao amin'ny tranokalanao WordPress miaraka amin'ny Downloader azo atao | Martech Zone
Ny fironana iray izay mitohy mitombo miaraka amin'ireo mpanjifako dia mametraka loharano ao amin'ny tranokalany nefa tsy manery ny olona hisoratra anarana hisintona azy ireo. PDF manokana - ao anatin'izany ny taratasy fotsy, ny taratasin'ny varotra, ny fandalinana tranga, ny tranga fampiasana, ny torolàlana, sns. Ohatra, ny mpiara-miombon'antoka sy ny vinavina dia matetika mangataka ny handefasana azy ireo taratasy fivarotana mba hizarana ny tolotra fonosana ananantsika. Ohatra vao haingana ny antsika Salesforce CRM Optimization fanompoana.
Ny tranokala sasany dia manolotra PDF amin'ny alàlan'ny bokotra fampidinana izay azon'ny mpitsidika kitihina mba hisintonana sy hanokafana PDF. Misy lesoka vitsivitsy amin'izany:
Software PDF – Mba hisintonana sy hanokafana PDF, ny mpampiasa anao dia tsy maintsy manana fonosana rindrambaiko apetraka sy amboarina amin'ny findainy na ny biraony.
PDF Versions - Ny PDF izay novolavolain'ny orinasa matetika dia manana dikan-teny sy fanavaozana. Raha mitahiry ny rohy mankany amin'ny PDF tranainy ny mpanjifanao, dia mety manana famoahana lany andro izy ireo.
Analytics – Ny PDF dia rakitra iray ao amin'ny tranokala ary tsy misy pejy web mifandray aminy haka izay angona analyse momba ny mpitsidika.
Ny valiny dia ny mampiditra ny PDF anao amin'ny pejin-tranonkala iray ary mizara izany rohy izany. Raha ampidirintsika ao anaty mpamaky PDF ao anatin'ny pejin-tranonkala ny PDF, dia afaka mijery ny PDF ny mpitsidika, misintona ny PDF (raha alefa) ary afaka manara-maso ny fijerin'ny pejy toy ny pejy hafa ao amin'ny Google Analytics isika.
Raha mametraka ny PDF Embed Plugin ho an'ny WordPress, azonao atao mora foana izany rehetra izany. Tena manana ohatra izahay amin'ny anay lisitry ny fanentanana amin'ny marketing. Ny plugin PDF Embedder dia manolotra kaody fohy azonao ampiasaina na azonao ampiasaina ny singa Gutenberg ho an'ny tonian-dahatsoratra WordPress default.
Toy izao ny vokatra eo amin'ny pejy:
Fanambarana: mpiara-miasa amiko aho PDF Plugins (ary koa mpanjifa).
Tags: Adobemisintona pdfembed pdfahoana nomampiditra pdfPDFPDF Embedpdf embedderpdf pluginpdf wordpress pluginWordPressplugin WordPresswp pdf
@dknewmedia Misaotra anao tamin'ny lahatsoratrao momba ny fampidirana PDF! Mora arahina, miasa toy ny ody, ary ny tsara indrindra dia nanampy tamin'ny famahana olana. Bravo! Tohizo ny lahatsoratra tsara.